10 Iingcebiso ukuhlala kwiShape ngelixa Uhamba | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Iingcebiso ukuhlala kwiShape ngelixa Uhamba
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 02/06/2020)
Ukuhlala ukwimo xa uhambela ngaphandle kwamathandabuzo kuyingxaki. Ukutya okuhendayo kuhlala kunikezelwa. Oku kudityaniswa nekhefu kwindlela yakho yesiqhelo yokuzivocavoca ekhokelela ekuweni kweenqwelo zokuzilolonga. Ke umntu uhlala njani elungile ngelixa ehamba? Akukho nzima njengoko ucinga. Namathela nje kwimithetho embalwa elula, sebenzisa amandla athile, kwaye uya kuba nakho ukubuyela ekhaya kwimpilo enkulu efanayo eyaqala iholide yakho ngayo.
Train Transport Ingaba I-Eco-Friendly Way To Travel. Eli nqaku ibhalwe ukuba afunde Train Travel ngu Gcina A Isitimela, Amatikiti eeTrayiti abiza ixabiso eliphantsi Emhlabeni.
Hamba ngokusemandleni akho ukuze uhlale ulungile
Nangona nje kusetyenziswa izithuthi zikawonke-wonke inokuvakala njengesona sicwangciso silula, zama ukuhamba endaweni yoko. Umgama omfutshane ulungile kwabo bangafanelekanga kangako, nangona okukhona usenza, kokukhona womelele ngakumbi xa useluhambeni kuyonyuka. A long brisk walk can make all the difference when staying in shape while traveling for those who are already quite fit. Consider getting off your bus or taxi a few blocks before so that you can walk the rest. Uloliwe, kanjalo, ikwayindlela enkulu yokujikeleza hayi kuphela ukusuka kwilizwe ukuya kwelinye, kodwa kwidolophu ukuya edolophini kwanakwiidolophu. Tsiba kuloliwe wakho ukumisa kancinci, and take in the sites and sounds of your holiday destination to maximize your ability to stay in shape while traveling.
Amatikiti eMilan ukuya eRoma
Pakisha Izinto ezifanelekileyo
Ukuba ucwangcisa ukuhlala ekwimo xa useluhambeni ke zilungiselele ukuqhubeka, okanye ukuhamba ngeenyawo, okanye nokuhamba ngebhayisikile kufuneka uqiniseke ukuba unesixhobo esifanelekileyo. Gcina oku engqondweni ngelixa upakisha. Ukuba kuya kufuneka ukhethe phakathi kwesinye isibini sezihlangu eziphucukileyo okanye isibini esimdaka, Pakisha iiteki. Akusayi kubakho nto imbi njengokufika kwindawo entle, Ukuqonda ukuba UFUNA ngokwenene ukuba nomdlalo, kwaye ungabi nako ngoba ushiye igiya elungileyo ekhaya. Ukuvuka kwangethuba kwaye uye kwijog yenye yeendlela ezilungileyo zokubona. Phambi kokuba wonke umntu alale ebhedini, Umhlaba uthule kwaye umhle. Awungekhe uyenze le nto ngeebhutsi kunye neebhutsi nangona.
I-Zurich ukuya kwitikiti likaBern
Amatikiti eGeneva ukuya eBern
Iitikiti ezihlanganisiweyo eziya eBern
I-Zurich ukuya eHamburg amatikiti
Bekela ecaleni 15 Imizuzu yokuhlala eShape ngelixa uhamba
Ukuhlala usesimweni xa uhambela kuhamba malunga nokuzivocavoca. Awulindelanga ukuligcina ubunzima bemisipha yakho kunye nokuqina xa usohambeni xa usitya ukutya okuninzi, sela imithwalo yeziselo, kwaye musa ukwenza nayiphi na imisebenzi. Udinga kuphela 15 imizuzu yonke ntsasa ukuze ufumane i-mini yokuzivocavoca ngaphakathi. Ukuba ukwindawo yendalo efana nolwandle, phuma ngaphambi kokuba uxakeke kakhulu, kwaye wenze i-yoga okanye uqeqesho lwamandla esanti. I-Cardio inokufezekiswa ngokuqhutywa, ukwenyusa, okanye ukubhukuda okungafuneki. I-YouTube ineevidiyo ezininzi ezintle kunye nemibono emfutshane, ukusebenzisa iiholide okusekwe ngeholide ukugcina kunye nokuphucula impilo ngelixa useluhambeni. Zama ukungazibandakanyi kakhulu ngokuhlwa, njengoko oku kuyakuchaphazela ukusebenza kwakho kwentsasa kwaye okokugqibela indlela oziphethe kakuhle ngayo xa uhlala.
Iibhasi ukuya kwitikiti laseBruges
Amatikiti eAnwerp ukuya eBruges
Ibrussels ukuya eVienna amatikiti
Amatikiti eGhent ukuya eBruges
Hlala kwiShape ngelixa Uhamba ngokutya ngokusempilweni
Ilungile, I-buttery croissants kunye nezinye izinto ezilungileyo zinokukujonga usuka emva kwezinto zokubala zeglasi, kodwa ihlala ilicebo elilungileyo ukugcina isixa esilinganiselweyo samandla. Yitya ukutya, ngandlela yonke, kodwa musa ukuhamba ngaphezulu. Ngena kwezinye iziqhamo kwisidlo sakusasa, kunye nesaladi yesidlo sasemini ukukunceda ngokuhlala ubume xa uhamba. Ngale ndlela ugcine iikhalori zakho ziphantsi ngokwaneleyo ukuba ukwazi ukuzonwabisa isidlo sangokuhlwa.
Amsterdam ukuya eLondon amatikiti
Amatikiti eParis ukuya eLondon
I-Berlin iya kwitikiti laseLondon
Iibhasi eziya kwitikiti laseLondon
Ukuhlala kwiShape ngelixa Uhamba By Taking The Stairs
Ukuba uhlala ehotele enemigangatho emininzi, unethuba elifanelekileyo! Endaweni yokuthatha isinyusi, thatha izitebhisi! Olu tshintsho lula lomkhwa luya kufumana uninzi lwekhadioo yonke imihla, kwaye kukumisela uhambo olusempilweni noluninzi. Ukuba awunazo izitebhisi okanye inqwelomoya enye, fumana ezinye kwindawo yakho ekufuphi kwaye ubaleke uye ezantsi kubo amaxesha ambalwa ukunceda ngokuhlala usesimweni ngelixa useluhambeni.
Dusseldorf ukuya kwitikiti laseMunich
Dresden ukuya kwitikiti laseMunich
Amatikiti eParis ukuya eMunich
I-Bonn kwitikiti laseMunich
Khwela ibhayisekile ukuze uhlale eShape ngelixa uhamba
Ngendlela efanayo esicebise ukuba uhambe endaweni yokuhamba ngebhasi, zama ukuqesha ibhayisekile endaweni yokuba ubambe izithuthi. Amazwe amaninzi aya kuba nayo iibhayisikile ziyafumaneka. Bamba uloliwe ukuya kufutshane nendawo oya kuyo, kwaye emva koko thatha uhambo ngebhayisekile indlela eseleyo. Xa ufuna ukubuyela, jikeleza umva ubuyela kwi Isikhululo sikaloliwe kwaye ushiye ibhayisekile yakho apho ubufumene khona, kuhle ukuhlala ekwimo xa useluhambeni!
Amatikiti aseFrankfurt ukuya eBerlin
I-Copenhagen ukuya kwitikiti laseBerlin
Ukuhamba ukuya kwitikiti laseBerlin
I-Hamburg ukuya kwitikiti laseBerlin
Jonga imisebenzi yendawo ohlala kuyo kwaye uhlale kwisimo xa usenza uhambo
Amazwe amaninzi anezifundo zalapha ekucwangcisweni ezixekweni. Yoga okanye calisthenics kwiipaki okanye Hikes olungelelanisiweyo zihlala zikhona. Joyina kule misebenzi ukuze uhlale usesimweni ngelixa useluhambeni. I-CrossFit yenye into eyenzeka kwihlabathi liphuhlisa ukuqina komzimba, ke thatha ixesha ngaphandle kweshedyuli yakho ujoyine iklasi, ngaphakathi nangaphandle. Your local guide or concierge should be able to point you in the right direction for these.
Sebenzisa izikhululo zoololiwe kunye nezikhululo zeenqwelo moya njengeehambo zokuhamba
Okona kumnandi njengokuhamba ngololiwe, alikho ithuba elininzi lokuzilolonga ngelixa ushukumayo. Kuyahamba iinqwelomoya. Ngelixa ulinde indiza yakho okanye uloliwe, thatha ithuba lokuxhuma kwezinye iindlebe kwaye uthathe i-brisk stroll ejikeleze i-terminal ukuncedisa ngokuhlala ukwimo xa uhamba. Qiniseka ukuba umthwalo wakho ukhuselekile kuqala, kunjalo! Soloko ushiya ukuqhubeka kwakho nomntu omthembayo. Xa uhamba, faka ezinye ii-lunges kwi-stroll. Unokubonakala umnandi, kodwa umzimba wakho uya kubulela kamva. Ukuhlala usesimweni xa useluhambeni kubandakanya ukuthatha lonke ithuba elivelayo. Bhuka itikiti lakho kaloliwe kwi-intanethi ngoku, kwaye uzinike ixesha elongezelelekileyo lokusebenzisa ngokunemveliso ukuze uhlale ekwimo!
Amatikiti eMilan ukuya eVenice
Amatikiti ePadua ukuya eVenice
I-Bologna ukuya kwitikiti laseVenice
IRoma ukuya kwitikiti laseVenice
Pakisha iibhendi zakho zoLunga ukuze uhlale kwi-Shape ngelixa Uhamba
Iibhanti zokuzivocavoca zilula, Kulula ukuyithwala kunye nendlela entle yokuhlala uncipha ngelixa uhamba. Ungabamisa egumbini lakho, kwaye wenze isekethe yokuzivocavoca esiseyona mini ifanelekileyo. Thatha ixesha yonke imihla wenze umjikelo okanye emihlanu yesekethe yakho, kwaye awuziva kubi kakhulu malunga nokutya onke amaqebelengwane amnandi.
Ukuba naloo ndawo yedikethiweyo echibini, okanye ibhiya enomkhenkce kwi-pub ihlala imnandi. Overdoing it will result in a drop in your fitness. Not just because of the sugar but also the lack of motivation the next day. Yiba nesiselo esingaqhelekanga ukuba uyafuna, kodwa zama ukuzigcina ubuncinci. Khumbula ukuba i-cocktails ezineshukela ziphezulu kakhulu kwiikhalori, Njengebhiya newayini emhlophe. Ukuzisebenzela ukuze uncede ngokuhlala usesimweni xa useluhambeni kuyakwenza kube nzima ngakumbi ukusebenza kwakho okucwangcisiweyo.
I-Nuremberg ukuya kwitikiti lasePrague
IMunich ukuya kwitikiti lasePrague
Berlin ukuya ePrague amatikiti
IVienna ukuya kwitikiti lasePrague
Ukuhamba kumnandi kumnandi kwiimeko ezininzi. Inga, kunjalo, ukuphazamisa kakhulu nakuluphi na ulawulo lomzimba. Ukuhlala usesimweni xa useluhambeni kubandakanya ukubambelela kwinkqubo yokutya esempilweni kunye nokuzilolonga ixesha elininzi. Ungakulibali ukunciphisa ukusela isiselo esinxilisayo. Khetha Gcina A Isitimela, singathanda ukukunceda ukonwabele uhambo lwakho!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “10 Iingcebiso ukuhlala kwiShape ngelixa Uhamba” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/tips-staying-shape-traveling/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Kule linki ilandelayo, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lo kuxhumana ukuba IsiNgesi iindlela emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, kwaye ungazitshintsha i-es ukuya kuthi ga okanye ezinye kunye nolwimi olungakumbi olukhethiweyo.
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha ukuhamba iBritane, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Train Travel The Netherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Uloliwe ohamba eDenmark, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Train Travel The Netherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe